Fivha Yekutakura inowana chigamba chitsva | Linux Vakapindwa muropa
Fivha Yekutakura inowana chigamba chitsva
Kune avo vese vanoziva kana vane yako yekutakura vhidhiyo mutambo Kutengesa Fivhiri, kune mashoko akanaka. Zvinoitika kuti pane chigamba chitsva chiripo, Convenience Patch ine nhau uye inowanikwa kubva ikozvino zvichienda kune ese ari maLinux, Mac uye Windows mavhezheni. Iyo chigamba nyowani inosanganisira mamwe akagadziriswa mabugs uyezve zvimwe zvimwe zvitsva maficha.
Mugadziri Urban Games yakaburitsa chigamba mumwedzi uno waMbudzi uye isu tinogona kutonakidzwa nezvakanakira, senge izvo zvakaverengerwa mumushandisi interface, scroll bar, basa rekuvandudza dialog sarudzo (mod), kugadzirisa mune system auto-chengetedza , vhidhiyo yemitambo yekumisikidza menyu yakakwenenzverwa, chitima chakagadziridzwa uye zvimwe zvinhu zvitsva zvekutakura izvi mumutambo wevhidhiyo, zvichipa kuvandudzwa, mamwe matambudziko mukugadzirisa ave kugadziriswa, uye mamwe mabhugi anozivikanwa haasisipo.
Kana iwe uchida kuona iyo yekuvandudza manotsi uye iyo changelog zvizere, unogona kuzviona pano. Saka mutambo wevhidhiyo wakatishamisa mu2014, iyo Chitima Fivha, yakazopedzisira yashanduka muna2017 kune iri rimwe zita rekutakura Fivha ine zvakawanda zvitsva maficha uye ikozvino tinowana zvakawanda neichi chigamba. Neiyi nzira yekutakura yekunyepedzera yevhidhiyo mutambo haungogone kuona zvitima chete, asi zvakare zvimwe zvekufambisa senge ngarava, marori, ndege, nezvimwe.
Saka kana iwe uchida mota, uyu unogona kunge uri mutambo wevhidhiyo unovaraidza iwe, uye ikozvino haugone kungotenga mutambo chete asi zvakare kuwana kuvandudzwa kwechigamba chitsva. Uye iwe unofanirwa kuziva kuti Urban Games iri kutoshanda pachikwata chinotevera icho chinovimbisa kugadzirisa mashandiro ... Kuti uzvitenge, unogona kusarudza pakati pesarudzo dzinoverengeka. chiutsi, Gogi uye Chitoro Chinozvininipisa, Pamutengo unosvika madhora 34,99, mumwe mutengo wakakwira uchienzaniswa nemamwe mazita, asi ini ndinofunga zvakakosha kune vateveri vekutakura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Fivha Yekutakura inowana chigamba chitsva
LibreOffice 5.4.3 yakaburitswa neanopfuura makumi mashanu mabugs abviswa
PC-MOS yakaberekwazve seyakavhurwa sosi projekiti